Munyori: Project Opensky, Mike Maarse, Devyn Silverstein, Repack naLuis Quintero, uye nevanyori siyana dzakawanda http://fsxluchoals.blogspot.com
Hekuno Boeing 747 siyana rakakamurwa 8 makuru Mabhokisi zvikuru hwakadzama. Bhuku rino rine 16 repaintskubva kumusoro kusvikira svikiro unhu yakakamurwa maererano muenzaniso wavo. Pamwe chaiko uye netsika unorira neimwe mhando injini. A wedzera-mberi zvikuru mafeni pamusoro 747.
Rine 6 Boeing 747-100 mienzaniso izvo kuganhura kupinda Standard, -SR uye -SF dzomutauro.
bhuku rino haasi ane Virtual Cockpit (VC) nokuda mienzaniso kuva FS2004 chizvarwa kwete FSX.
American Airlines / Air / Eastern Air / Rollout Livery / Japan Air
United nhuri Services
Downloads: 37 532
Downloads: 43 162
Downloads: 95 211
Downloads: 12 455
Downloads: 119 167